QODIDDII SAMSAMKA IYO NADARKII ABDI MUDHALIB | www.maandeeq.webs.com/
Posted on August 22, 2010 by indhodeeq
Goortuu hurdadii ka kacay ayuu meeshii tegey isaga oo uu la socdo wiilkiisii Xaarith oo uu markaas carruur ka qabay wuuna qoday. Markii ceelkii la helay ayaa qureysh kula doodday oo tiri: “Cabdimudhalibow waa ceelkii aabahayo Ismaaciil waxaana ku leenahay xaq ee aan kula wadaagsano.” Hase yeeshee Cabdimudhalib wuu ka diidey arrinkaa oo wuxuu yiri: “mayeelayo arrinkaan aniga ayaa la igu khaas yeelay”. Muddo markii la dooday oo arrinkii lagu kala bixi waayey ayaa la go’aansaday in loo xukun tago habar wax sheegsheegta. Habartii ayaa la wada aaday. Goortii meel cidla ah oo dhexe la marayo ayaa Cabdimudhalib iyo nimankii jifadiisa ahaa, ee reer Cabdimanaf, biyihii ka go’een markaasey raggii kale ee qureysh oo la socday weyddiisteen, hase ahaatee wey u diideen iyagoo ka baqaya in ay dhammaantood oon u wada dhintaan.
Cabdullaahi, oo sidaan soo sheegnayba ahaa nebiga aabbihiis, waxaa hooyadiis la odhan jirey Faadumo bintu Caa’id binu Cimraan binu Makhsuum. Cabdullaahi wuxuu guursaday Aamino bintu Wahab binu Cabdimanaaf binu Suhra bin Kilaab, waxayna isku dhisteen magaalada Makka, muddo yar ka dibna, Aamino oo uur leh, ayaa Cabdullaahi arrin u baxay oo aadey Madiina, halkaas oo uu ku geeriyoodey. Da’diisu waxay markaas ahayd 25 Sano
« Tafsiirka Quraanka oo ku turjuman Afsoomali Axkaamta Gabaddha Muslimka ah »